Maxay tahay sababta ay uga baaqdeen Madaxweynayaashii Hore Beledweyne ? – Idil News
Maxay tahay sababta ay uga baaqdeen Madaxweynayaashii Hore Beledweyne ?
Ujeedada ay uga baaqsadeen safarkooda Magaalada Baladweyne ayaa waxaa kamid ah Garoonka Diyaaradaha Magaaladaas oo u xirmay roob in ka badan Sideed saacadood ka da’ayay Magaada Baladweyne iyo deegaannada hoostaga.
“Waan ka xunnahay Safarkeenii maanta lagu tagi lahaa Beledweyne iyo Berdaale oo dib udhac kuyimid kadib markii xaley ilaa saaka ay roobab xoogan kadaen taas oo sababtey in Airport ka Beledweyne diyaaraduhu ay kutagi karin” ayuu yiri Sanoter Ilyaas.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyana lagu waday in maanta ay diyaarado gargaar sida u dirto Magaalooyinka Baladweyne iyo Bardaale, kuwaas oo dib u dhacay roobabka da,ay aawadood.